VLC media player inovandudzwa kune yayo nyowani vhezheni 2.2.8 | Linux Vakapindwa muropa
VLC ichaunza vhezheni itsva munguva pfupi, kunyanya vhezheni 2.2.2, iyo yatove muBeta vhezheni
VLC media player inozivikanwa yemahara uye yakavhurwa sosi midhiya mutambi yakagadzirirwa chirongwa cheVideoLAN. Uyu mutambi mukuru ane akati wandei vhezheni dzakasiyana dzekushandisa masystem, izvo zvinoita kuti ive multiplatform mutambi.
Chinhu chikuru nezveVLC kugona kwayo kutamba chero chero vhidhiyo fomati pasina kuisa macodec. zvekunze uye zvinogona kuridza mavhidhiyo muDVD, mafomu eBururay, pazvisarudzo zvakajairika, mune yakadzama tsananguro kana kunyangwe mukutsanangurwa kwepamusoro kana 4K
Mavhiki akati wandei apfuura kubva pakuvandudzwa kwayo kwekupedzisira inova vhezheni 2.2.8 mune mamwe matambudziko neavhidhiyo fomati akagadziriswa, mushanduro dzakapfuura gadziriso dzinoverengeka dzakagadzirwawo.
Isu takawana mamwe mac OS anoenderana bugs akagadziriswa yeyo yaibata kukanganisa kwemamwe mafomati uye bhagi iyo yaitadzisa iyo otomatiki kugadzirisa kubva kuve nematambudziko nemutambi.
Kune rimwe divi zvimwe zvikanganiso zvine madikhodhi zvakagadziriswa yeiyi inosimbisa:
Gadzirisa murwi weFlac nyora kufashukira pane kugadzirisa
Ivo vanogadzirisa iyo bug mune iyo libavcodec module.
Gadzirisa risingaperi chiuno mune zvinyorwa zvidiki
AAC 7.1 nzira yekutsvaga nzira
1 Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 paUbuntu uye zvigadzirwa?
2 Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 pane Fedora uye zvigadzirwa?
3 Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 paUbuntu uye zvigadzirwa?
Kugona kuiisa mune yedu system isu tinongofanirwa kuiisa kubva kuUbuntu Software Center sezvo iri yakanangana mumahofisi epamutemo kana isu tinofanirwa kuvhura terminal nekuita zvinotevera:
Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 pane Fedora uye zvigadzirwa?
Panyaya yaFedora, isu tinofanirwa kurodha pasi zvinotevera kubva ku RMPFusion repository sezvo tisina VLC mune yayo yazvino vhezheni kubva kune yepamutemo Fedora repositori, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tiite zvinotevera:
Maitiro ekuisa VLC media Player 2.2.8 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
MuArch uye zvigadzirwa zvinogona kumisikidza mutambi ne pacman, vhura terminal uye uite zvinotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » VLC media player inovandudzwa kune yayo nyowani vhezheni 2.2.8